ဆယ်တန်းအောင်စာရင်း ထွက်တိုင်း အထိုးခံနေရတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ တောင်းပန်စကား… -
ဆယ်တန်းအောင်စာရင်း ထွက်တိုင်း အထိုးခံနေရတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ တောင်းပန်စကား…
ဆယ်တန်းအောင်စာရင်း ထွက်တိုင်း အထိုးခံနေရတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ တောင်းပန်စကား…
ကဲ ကဲ နီး လာ ပီ ဆို တော့ ကာ ကိုယ် တိုင် အ သိ ပေး ကြေ ညာ လိုက် ပီ။ ကိုယ် မ တင် လဲ သူ များ တင် ကြ မှာ လေ။ ဒီ နှစ် လေး တော့ ပေး မ အောင် ချင် ကြ ဘူး လာ ဟမ်…
ထင် နေ ပါ တယ် ငါ့ ပုံ ပါ လာ တော့ မယ် ဆွာ။ ငါ့ ဘ ဝ လေး က လဲ သ နား စ ရာ လေး ခု ချိန် ထိ အ ထိုး ခံ နေ ရတုန်း….
အရင်နှစ်၁၀တန်းလဲကျတယ်။ ဒီနှစ်လဲကျုပ်မအောင်ပြန်ဘူး။ အထိုးခံရပြန်ပီ……
နှောက်နှစ်တစ်ရာလဲ ငါအောင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဆယ်တန်းဆိုတာကြီးရှိနေသ၍ ဖြေတဲ့ကျောင်းသားတွေ ရှိနေ မှာပဲ
မအောင်တဲ့ကျောင်းသားတွေရှိနေသ၍ ငါ့ပုံလေးကိုအသုံးချနေသ၍ အထိုးခံနေရမှာလေ။
ငါ့ပုံတစ်ပုံကလဲနော် ဆယ်တန်း မအောင်လို့ အကိုက ထိုးတယ်ဖြစ်လိုက် စားသောက်ဆိုင်မှာ ဝက်နံရိုးကြော်ရှိတယ်လို့ မာမူကိုပြောမိလို့ မာမူကထိုးတယ် ဖြစ်လိုက်နဲ့။
ရောဂါဖြစ်တုန်းက တင်ထားတဲ့ပုံပါအေ ၃နှစ်ရှိပီ ခုထိမပီးဆုံးနိုင်ဘူးနော့
ကျောင်း တော့ ပီး ခဲ့ တယ်။ ၄တန်း နဲ့ လေ။ ခု ဆို ရော ဂါ တောင် ပျောက် လို့ ကျုပ် တောင် လင် ယူ သား မွေး နေ ပီ။
ခု ထိ မ ပီး ဆုံး တတ် တော့ ဘူး။ လာ မဲ့ နှစ် လေး တော့ ပေး အောင် ကြ ပါ ဟ။
မ ဝေ လွင် နန်း ဝေ ရဲ့ လက် ရှိ ပုံ ရိပ် များ ကို လည်း ဖော် ပြ လိုက် ပါ တယ်…
ခရက်ဒစ် Wai Lwin Nan Wai
ဆယျတနျးအောငျစာရငျး ထှကျတိုငျး အထိုးခံနရေတဲ့ ကောငျမလေးရဲ့ တောငျးပနျစကား…
ကဲ ကဲ နီး လာ ပီ ဆို တော့ ကာ ကိုယျ တိုငျ အ သိ ပေး ကွေ ညာ လိုကျ ပီ။ ကိုယျ မ တငျ လဲ သူ မြား တငျ ကွ မှာ လေ။ ဒီ နှဈ လေး တော့ ပေး မ အောငျ ခငျြ ကွ ဘူး လာ ဟမျ…
ထငျ နေ ပါ တယျ ငါ့ ပုံ ပါ လာ တော့ မယျ ဆှာ။ ငါ့ ဘ ဝ လေး က လဲ သ နား စ ရာ လေး ခု ခြိနျ ထိ အ ထိုး ခံ နေ ရတုနျး….
အရငျနှဈ၁၀တနျးလဲကတြယျ။ ဒီနှဈလဲကြုပျမအောငျပွနျဘူး။ အထိုးခံရပွနျပီ……
နှောကျနှဈတဈရာလဲ ငါအောငျမှာမဟုတျဘူး။ ဆယျတနျးဆိုတာကွီးရှိနသေ၍ ဖွတေဲ့ကြောငျးသားတှေ ရှိနေ မှာပဲ
ရောဂါဖွဈတုနျးက တငျထားတဲ့ပုံပါအေ ၃နှဈရှိပီ ခုထိမပီးဆုံးနိုငျဘူးနော့
ကြောငျး တော့ ပီး ခဲ့ တယျ။ ၄တနျး နဲ့ လေ။ ခု ဆို ရော ဂါ တောငျ ပြောကျ လို့ ကြုပျ တောငျ လငျ ယူ သား မှေး နေ ပီ။
ခု ထိ မ ပီး ဆုံး တတျ တော့ ဘူး။ လာ မဲ့ နှဈ လေး တော့ ပေး အောငျ ကွ ပါ ဟ။
မ ဝေ လှငျ နနျး ဝေ ရဲ့ လကျ ရှိ ပုံ ရိပျ မြား ကို လညျး ဖျော ပွ လိုကျ ပါ တယျ…
ခရကျဒဈ Wai Lwin Nan Wai
This Year : 204887
Total Users : 500020